Nikeza ngeNut Stainless yeNut, iNtainless Insimbi ekhutshelweyo, I-hex Nut yeStainless kuneemfuno zakho
Inkcazo:I-Nut Stainless,I-Nut Stainless Knurled Nut,Intsimbi yeCage engenanto,I-hex Nut engenazintsu,,
Home > Imveliso > Amandongomane aChongiweyo > I-Nut Stainless
Iintlobo zeMveliso ze- I-Nut Stainless , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Nut Stainless , I-Nut Stainless Knurled Nut ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umgangatho weStain ongenasiseko
Intsimbi engenasiseko ephezulu yokuThwala i-Nut M2.5 Nuts
I-M3 yentsimbi ye-Nitro yensimbi engenasiciko
Intsimbi ye-M6 yokutshixa iilitha zamanqatha eLug
Umgangatho ophakamileyo we-eBay amaNtsimbi eNtsimbi
Ukuthengisa okushushu iAmazon yeZitshixo zeNtsimbi
Intengiso eshushu eBay eNcitshisiweyo yaMantla eNtsimbi
Intsimbi ye-Fainless Threaded Nut M2.5 Nuts
Ivenkile eshushu eAmazon M3 yentsimbi yeBhokisi yeNut
Umgangatho ophezulu we-OEM engenasiseko i-hex Nut
Eyona ndawo intle yokuPhakama yeHell Nut
I-Insertain Stainless Insert Lock yeHex Nut
Ukuthengisa iimveliso eziPhezulu zoMgangatho weNtsimbi engenabala
I-Hot M3 eNtsimbi engenasiphene
Amantla angaboniyo angenazintsimbi kwi-Carbon Fiber Sheet
I-M3 iNaylon emnyama faka amaNtsimbi angenazintsimbi
I-M3 Cinezela amaNqaku eScrews kwiCarbon
I-M3 yeNtsimbi yePrinta engaPheleliyo nge-naylon
I-M2 eNtsimbi yeBhola yokuTshixiza iiNqwelo zeSondo
Ingcaciso yeMveliso I-Amazon Ixabiso ngeNtsimbi engenasiseko Intshayelelo yeMveliso Iinuts zesinyithi ezingenazitayile zineentlobo ezimbini zamanqatha okutshixa kwaye ucinezela amandongomane. Ukomelela okuphezulu kwetsimbi yentsimbi i-hex nut ihlala...
Ingcaciso yeMveliso Ukomelela okuphezulu kwesinyithi sensimbi ye-hex nut Intshayelelo yeMveliso Iinuts zesinyithi ezingenazitayile zineentlobo ezimbini zamanqatha okutshixa kwaye ucinezela amandongomane. Ukomelela okuphezulu kwetsimbi yentsimbi...
Umgangatho weStain ongenasiseko Intshayelelo yeMveliso I-Nut ye-Stainless ibandakanya i-nut nut yokucinezela, ilokitshi yokutshixa. Uhlobo lweM4 Stainless Insimbi ekumgangatho ophezulu iBolt Nut luhlobo olunye lwento yokucinezela. Izitena zentsimbi...
Intsimbi engenasiseko ephezulu yokuThwala i-Nut M2.5 Nuts Intshayelelo yeMveliso Sithanda ukwazisa olu hlobo oluphezulu lweNtsimbi yeZitshixo zeNtsimbi. Intsimbi engenasiseko ephezulu yokuThwala i-Nut M2.5 Nuts inokusetyenziselwa i-RC, Drones....
I-M3 yentsimbi ye-Nitro yensimbi engenasiciko Intshayelelo yeMveliso Cinezela amantongomane kunye nokutshixwa kwamantongomane ezintsimbi zethambo. I-M3 yentsimbi ye-Nitro yensimbi engenasiciko itshixiza nati. I-M3 yentsimbi ye-Nitell Lock yeNut...
Intsimbi ye-M6 yokutshixa iilitha zamanqatha eLug Intshayelelo yeMveliso Sicinezele iinuts kunye nokutshixela amantongomane e-SS. Intsimbi ye-M6 yokutshixa iilitha zamanqatha eLug luhlobo lwe-SS etshixayo izakhamzimba. Intsimbi ye-M6 yokutshixa...
Umgangatho ophakamileyo we-eBay amaNtsimbi eNtsimbi Intshayelelo yeMveliso Iinuts zesinyithi ezingenazitayile zineentlobo ezimbini zamanqatha okutshixa kwaye ucinezela amandongomane. Uhlobo lwee- eBay eziPhezulu zeNqanaba lesinyithi Uluhlu lwe-nut...
Ukuthengisa okushushu iAmazon yeZitshixo zeNtsimbi Intshayelelo yeMveliso Sicinezele amantongomane kunye nokutshixela iingcongconi zentsimbi engenasici. Uhlobo lweNtengiso eshushu eAmazon Engatshiyo luhlobo olunye lweliti yokuvala. Ukuthengisa...
Intengiso eshushu eBay eNcitshisiweyo yaMantla eNtsimbi Intshayelelo yeMveliso Olu hlobo lweNut Stainless yeNut lunokuhanjiswa okanye lufakelwe intambo. Uhlobo lweM2 Stainless Insimbi ekumgangatho ophezulu iBolt Nut ngamanye amaxesha luya kufuneka....
Intsimbi ye-Fainless Threaded Nut M2.5 Nuts Intshayelelo yeMveliso Olu hlobo lweNut Stainless yeNut luhonjiswe kakuhle. Uhlobo lwe-M2.5 insimbi engenasiseko siphezulu iBolt Nut yenye yeentlobo zamandongomane ezithandwayo. Intsimbi yeThole...
Ivenkile eshushu eAmazon M3 yentsimbi yeBhokisi yeNut Intshayelelo yeMveliso Olu luhlobo lweNut Stainless Nut luhlobo oluthile lwento yokucinezela. Uhlobo lwe-M3 Stainless Steel High Bolt Nut lolona hlobo ludumileyo luhlobo lwe-nut. Ivenkile eshushu...
Umgangatho ophezulu we-OEM engenasiseko i-hex Nut Intshayelelo yeMveliso ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA: La maNcini yi-100% 18-8 (304) insimbi engenye engenye yeyona ndlela iphezulu yesinyithi enganyangekiyo, isenza ukuba ihlale ixesha elide kunamanye...
Eyona ndawo intle yokuPhakama yeHell Nut Intshayelelo yeMveliso ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA: La maNcini yi-100% 18-8 (304) insimbi engenye engenye yeyona ndlela iphezulu yesinyithi enganyangekiyo, isenza ukuba ihlale ixesha elide kunamanye...
I-Insertain Stainless Insert Lock yeHex Nut Intshayelelo yeMveliso ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA: La maNcini yi-100% 18-8 (304) insimbi engenye engenye yeyona ndlela iphezulu yesinyithi enganyangekiyo, isenza ukuba ihlale ixesha elide kunamanye...
Ukuthengisa iimveliso eziPhezulu zoMgangatho weNtsimbi engenabala Intshayelelo yeMveliso ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA: La maNcini yi-100% 18-8 (304) insimbi engenye engenye yeyona ndlela iphezulu yesinyithi enganyangekiyo, isenza ukuba ihlale ixesha...
I-Hot M3 eNtsimbi engenasiphene Intshayelelo yeMveliso Izinto ezingafakwanga ngentsimbi engenasinyithi: i-nati ene-washer eyakhelweyo kunye inerst yenylon ukuthintela ukukhululwa. Sine-M3 eninzi yamandongomane enziwe ngesitokhwe kwaye enemibala...
I-M3 Amabala eNtsimbi angaGqibekanga kwiphepha leCarbon Fibre Intshayelelo yeMveliso Iinuts zethu zomatshini wokushicilela oyi-M3 zinesilivere kunye nombala webhaluni aziwa kakhulu kwimarike yezakhelo ze-carbn fiber. Ukuba ufuna ezinye izinto...
I-M3 iNaylon emnyama faka amaNtsimbi angenazintsimbi Intshayelelo yeMveliso Ngama-nati sinee- aluminium ezininzi s , iinaliti zesinyithi , i- hexagon nut kunye ne- nylon nati kwisitokhwe. Ubungakanani obuqhelekileyo yayingu-M3 M4 M5, esinye isayizi...
I-M3 Cinezela amaNqaku eScrews kwiCarbon Intshayelelo yeMveliso Iinuts zethu zomatshini wokushicilela oyi-M3 zinesilivere kunye nombala webhaluni aziwa kakhulu kwimarike yezakhelo ze-carbn fiber. Ukuba ufuna ezinye izinto ezinjenge aluminium, ubhedu...
I-M3 Cinezela iiNtsimbi ezingenasiseko zeScrews kwiCarbon Intshayelelo yeMveliso Iinuts zethu zomatshini wokushicilela oyi-M3 zinesilivere kunye nombala webhaluni aziwa kakhulu kwimarike yezakhelo ze-carbn fiber. Ukuba ufuna ezinye izinto ezinjenge...
I-M2 eNtsimbi yeBhola yokuTshixiza iiNqwelo zeSondo Intshayelelo yeMveliso Uluhlu lwee-SS Lock Nuts njengesixhobo esisheshayo. I-M2 eNtsimbi yeBhola yokuTshixiza iiNqwelo zeSondo inokusetyenziselwa i-FPV, iimoto kunye neenqwelomoya. Umbala we-M2...
KwiChina I-Nut Stainless Abaxhasi
Amantongomane angenazintsimbi anamandla kwaye intsimbi engenasici iFlange yokutshixwa kwamandongomane, intsimbi engaginyiswanga I-Flange ye-serated yokutshixa yamandongomane, iingcongconi zensimbi yokuzitshixela ngokwazo, amandongomane ezintsimbi ze-hex njl. Sisoloko sisebenzisa i-304 yensimbi engenasici ukuvelisa amandongomane angenazintsimbi. Ukuba ufuna ezinye izinto, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo. Ubungakanani obahlukeneyo kunye nemibala inokushintshwa ngokweempawu zakho okanye iimfuno. Ubukhulu obuthandwayo ziisayizi zeM3, M4 kunye neM5. Ukuba ufuna obunye ubungakanani, singakusivelisela bona.
I-Nut Stainless I-Nut Stainless Knurled Nut Intsimbi yeCage engenanto I-hex Nut engenazintsu I-Riv Nut ye-Stainless